आईपीएलः क्वालिफायर-२ मा पुग्यो कोलकाता - Muglan News
नेपाल आइडल–३ विजेताको विश्व भ्रमण तय
गाईको पिसाब प्रति लिटर होलसेल २२०० रुपया ३२०० खुल्ला ।
‘घाटी भन्दा तल’ गीतको चर्को आलोचना, दिपकले लेखे–‘भोली नाइटो भन्दा मुनी आउला’ (यस्तो छ उक्त गित,भिडियो)
Nepali News & Entertainment portal.
आईपीएलः क्वालिफायर-२ मा पुग्यो कोलकाता
२०७५ जेष्ठ १०, बिहीबार ०२:०६ May 24, 2018 Muglan News	0 Comments
१० जेठ, काठमाडौं । इण्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल)को एलिमिनेटर राउन्डमा कोलकाता नाइटराइडर्सले राजस्थान रोयल्सलाई २५ रनले हराएको छ । यो जितसँगै कोलकाता क्वालिफायर-२ मा पुग्न सफल भएको छ । अब कोलकाताले शुक्रबार सनराइजर्स हैदरावादसँग फाइनलमा पुग्नका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने छ ।
१७० रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको राजस्थानले निर्धारित २० ओभरमा ४ विकेटको क्षतिमा १४४ रनमात्र बनाउन सक्यो । सन्जु स्यामसनले सर्वाधिक ५० रन बनाए ।
यसअघि इडन गार्डेनमा टस हारेर ब्याटिङ गरेको कोलकाताले निर्धारित २० ओभरमा ७ विकेटको क्षतिमा १६९ रन बनाएको थियो । दिनेश कार्तिकले ५२ र आन्द्रे रसेलले नटआउट ४९ रन बनाए । बलिङ गर्ने क्रममा ३ ओभरमा २२ रन मात्र खर्चिएका रसेलले प्लेयर अफ दि म्याचको अवार्ड पाए ।
राजस्थानको टिमले इडन गार्डेनमा हालसम्म ८ म्याच खेलेको छ । उसले २००८ मा एकपटक जितेको राजस्थानले त्यसपछिका १० वर्षमा इडन गार्डनमा एउटा पनि जित निकाल्न सकेको छैन ।
राजस्थानका कप्तान अजिंक्य रहाणे र राहुल त्रिपाठीले सुन्दर शुरुआत गरेका थिए । दुवैले पहिलो विकेटका लागि ४७ रनको साझेदारी गरे । त्रिपाठी पियुष चावलाको बलमा २० रनमा आउट भएपछि सन्जु स्यामसन क्रिजमा आए र रहाणेसँग ६२ रनको साझेदारी गरे ।
रहाणे ४६ रनमा कुलदीप यादवको बलमा आउट भए । स्टुअर्ट बिन्नीले एक रन पनि बनाउन नसकेर पेभेलियन फर्किए ।
टस हारेर पहिले व्याटिङ गरेको कोलकाताको शुरुआत निकै खराब थियो । सुनिल नरेन ४ रन बनाएर आउट भए । उनी पहिलो ओभरमै कृष्णप्पा गौतमको शिकार भए । त्यसपछि गौतमले नै रोबिन उथप्पालाई ३ रनमा आउट गरे ।
चौथो ओभरमा जोफ्रा आचार्यले नितिश राणालाई ३ रनमा आउट गरे । चौथो विकेटको रुपमा क्रिस लिन आउट भए । उनी १८ रनमा श्रेयस गोपालको बलमा आउट भए । शुभमन गिलले २८ रन बनाउन सके ।
आईपीएल : मुम्बई इन्डियन्सका सामु कोलकाता नाइटराइडर्स…
पानि बिना नै आगो निभाउन पुग्यो दमकल नया प्रबिधिको विकास
गभर्नरलाई खुला पत्र: ८% मा लिएको ऋण १४.५५% पुग्यो,…
← टिपरको ठक्करबाट भक्तपुरमा तीनको घटनास्थलमै मृत्यु
गोरेसँगको बयानले थप रहस्य… →
ला लिगा फुटवलमा बार्सिलोना विजयी, मेस्सी र स्वरेजकाे १-१ गाेल
२०७४ माघ १५, सोमबार ००:३७ January 29, 2018 Muglan News 0
दिल्लीको पेजमा सन्दीपका विदेशी फ्यानले लेखे, यस्तो कमेन्ट ! हेर्नुहोस् जस्ताको तस्तै ||
२०७५ बैशाख १२, बुधबार ०७:५६ April 25, 2018 Muglan News 0
विश्वकपको टिकट बेच्न खुलेका ८ सय अनलाईन बन्द
२०७४ चैत्र २, शुक्रबार ०१:४७ March 16, 2018 Muglan News 0
फेसबुकमा सामेल हुनुहोस्
२०७६ आश्विन ६, सोमबार १५:१६ September 23, 2019 Muglan News 0
Spread the love 133 Viewsकाठमाडौं : नेपाल आइडल सिजन– ३ का विजेताहरूको विश्व भ्रमण तय भएको छ। सिजन ३ को अडिसन
२०७६ श्रावण १८, शनिबार २३:२१ August 3, 2019 Muglan News 0
कृषि ताजा खबर
२०७६ श्रावण १६, बिहीबार ०३:५२ August 1, 2019 Muglan News 0
२०७६ श्रावण १५, बुधबार १५:१९ July 31, 2019 Muglan News 0
Copyright © 2019 Muglan News. All rights reserved.